Ciidamada Mareykanka Ma faragelin doonaan Itoobiya, haddii dagaalku soo gaaro Addis Ababa..? - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Ciidamada Mareykanka Ma faragelin doonaan Itoobiya, haddii dagaalku soo gaaro Addis Ababa..?
Ciidammada Mareykanku ee ka howlgala saldhigga ay ku leeyihiin dalka Jabuuti ayaa heegan la geliyay, iyadoo loo diyaariyey faragelin ay ku sameeyaan dalka Itoobiya haddii uu dagaalku soo gaaro caasimadda Addis Ababa.
Taliyaha ciidamada Mareykanka ee saldhiga dalka Jabuuti Jeneral William Zana ayaa sheegay in diyaar u yihiin wax ka qabashada dhibaatooyinka gobolka Geeska Afrika, ayna dibaato kasta oo ka dhacda dalka Itoobiya ay saameyn ku yeelanyso ammaanka iyo xasilloonida guud ahaan gobolka.
“Doorkeena asaasiga ah ee halkan aan u joogno waa in aan awood u yeelano inaan ka jawaabno dhibaatooyiinka, gaar ahaan inaan ka jawaabno dhibaatada la so gudboonaata diblomaasiyiinta Mareykanka guud ahaan Afrika gaar ahaan kuwa bariga Afrika,” ayuu u sheegay BBC-da.
Jeneraalka hogaamiye ciidamada Mareykanka ee geeska Afrika Janaraal William Zana ayaa caddeeyay inay u diyaar garoobeen ka jawaabida haddii Addis ababo uu dagaal ka dhaco oo ay xaaladda sii xumaato.
Waxaa muuqata in Mareykanka uu dadaal u galay in wadahadal lagu dhammeeyo dagaalka Itoobiya, laakiin haddii xaaladu ka sii darto uu kaliya faragelinta u sameyn doono si Addis ababa looga daadgureeyo dadka Mareykanka iyo Ajanbiga kale.
Previous articleMareykanka oo Dalab cusub u diray madaxda maamul Goboleedyada iyo Dhaqaale diyaar u ah Doorashada
Next articleAKHRISO: Liiska Xildhibaanno ka mida Golaha Shacabka oo lagu dooranayo Muqdisho